Madaxweyne Farmaajo oo maanta xilka kala wareegi doonno Xasan Sheekh Maxamuud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo maanta xilka kala wareegi doonno Xasan Sheekh Maxamuud
Waxaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa in madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu xilka kala wareego madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Munaasabad si heer-sare loo soo agaasimay islamarkaana uu xilka isaga wareejinaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo ay ka dhacdo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Ciidanka nabad-sugidda qaranka iyo kuwa booliska ayaa maanta lagu arkayaa waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan waddooyinka soo galo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, iyadoona ammaanka goobta ay munasabadda ka dhaceeyso si weyn loo adkeeyay.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in munaasadda ay si toos ah u bilaabato, iyadoona ay kasoo qeyb-gali doonnaan mas’uuliyiin badan oo xafladaasi lagu casuumay.
Dhinaca kale, maalinta Arbacada ee soo socoto islamarkaana ay taariikhda ku beegan tahay 22-ka bishaan Febraayo ayaa lagu wadaa in sidoo kale la qabto munaasabadda caleemo saarka madaxweyne Farmaajo, iyadoona la filayo in xafladaasi ay kasoo qeybgalaan madax badan oo lagu casuumay.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa 22-ka bisha kadib guddo gali doonno soo magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub, kaas oo isna soo dhisi doonno xukuumadda cusub ee Soomaaliya, waxaana la filayaa in labadaasi mas’uul ay si wanaagsan u wada-shaqeyn doonnaan islamarkaana aanay wax khilaaf ah ka dhex dhalan doonin.